‘पूर्वमन्त्री शाहमाथि ठगीको आरोप, स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरूले रचेको षड्यन्त्र’ – Ktm Dainik
‘पूर्वमन्त्री शाहमाथि ठगीको आरोप, स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरूले रचेको षड्यन्त्र’ - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
‘पूर्वमन्त्री शाहमाथि ठगीको आरोप, स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरूले रचेको षड्यन्त्र’
गतसाता पूर्व मन्त्री प्रभु साहका विषयमा एउटा समाचार आयो, ‘क्यानडा पठाइदिने भन्दै ३० लाख ठगी’ । केही अनलाइन सन्चारमा माध्यममा एकपछि अर्कोगरी शाहकका विषयमा समाचाहरु आए । शाहले क्यानडा पठाइ दिने भन्दै ३० लाख ठगेको आरोप एक महिलाले गलाएकी थिइन् । साहको घरमै पुगेर होल्ला गरेपछी ती महिलालाई बानेश्वर प्रहरी बृतले पक्राउ गरेपछि समाचारहरु आएका थिए ।
क्यानडा पठाइदिने भन्दै ३० लाख लिएर साहले फिर्ता नगरेको महिलाको आरोप थियो । उनी थिइन् काठमाडौं बासबारीकी दिपा कुँवर केसी । उनका छोरालाई साहले क्यानडा पठाइ दिने भन्दै पैसा लिए पनि नपठाएको आरोप दिपाको थियो । १० फिर्ता दिएको भए पनि बाँकी २० लाख रुपैयाँ फिर्ता माग्दा पनि नदिएको आरोप उनको थियो ।
‘स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरुले निचता प्रदर्शन गर्दै रचेको षड्यन्त्र’
पूर्व मन्त्री साहले भने उक्त आरोप ठाडै अस्वीकार गर्दै आएका छन् । केही समयअघि माओवादी त्यागेका साहले राजनीतक पूर्वाग्रह राखेर आफूलाई फसाउने षड्यन्त्र प्रायोजित रुपमा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनी निकटहरूले प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहालले सो षड्यन्त्र रचेको बताउछ्न। प्रकाशित समाचारलाई भ्रामक समाचारको संज्ञा दिएका पूर्वमन्त्री साहले आफूमाथि लागेको आरोपप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । विना कुनै तथ्य प्रमाण आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले समाचारहरु आएको उनको दाबी छ ।
‘निराधार, कपोलकल्पित र निकै भ्रामक आरोपप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै त्यसमा कुनै पनि सत्यता नभएकोले यस्तो भ्रममा नपर्न सबैमा जानकारी गराउँदछु,’ उनले भनेका छन्, ‘विना कुनै तथ्य प्रमाण चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले समाचार सम्प्रेषण गर्ने केही प्रायोजित अनलाइनका कारण मिडिया माथिको विश्वास घट्न थालेकोले यस्ता अनर्गल प्रचारबाजी गर्ने कार्य बन्द गर्नरगराउन सबैमा आग्रह समेत गर्दछु । यो सब राजनीतिक रुपमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरुले निचता प्रदर्शन गर्दै रचेको षड्यन्त्र मात्र भएकोले यसमा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा संलग्न दोषीहरुलाई कानून बमोजिमको कार्यवाही गर्न माग समेत गर्दछु ।’
महिलालाको विवादित विगत
गत आइतबार लगातार विभिन्न अनलाइनमा समाचारहरु आएपछि त्यसपछि भने उक्त विषय सेलाएको छ । उल्टै आरोप लगाउने महिलाका विषयमा विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेको छ । विभिन्न अनलाइनमा आएका समाचारअनुसार काठमाडौकै उत्तरतर्फ पर्ने तत्कालीन साङला गाविसमा जन्मिएकी उनी सामान्य लेखपढ गर्न जान्दछिन् । सामान्य लेखपढ मात्रै जान्ने उनको निकटता भने प्रहरी प्रसाशनदेखि सरकारी कर्मचारी र नेतासम्म राम्रै छ । उनको परिवार र नातागोतासँग पनि सम्बन्ध राम्रो नभएको बताइन्छ । दिपाको जीवनमा परिवतर्तन आएको धेरै भएको छैन । उनी निकटका केही आफन्तकाअनुसार उनको यसअघि पहिले अन्तै बिहे भएको थियो । तर, उनकै कारण त्यो सम्बन्ध टिक्न सकेन । दोस्रो बिहेपछि उनको जीवनमा परिवर्तन आएको उनलाई चिन्नेहरु बताउँछन् ।
सरकारी कर्मचारीसँग पनि उनको राम्रै चिनजान र उठबस छ । उनले पूर्वमन्त्री शाहलाई पनि एक सचिवमार्फत नै पैसा दिएको दाबी गरेको समाचार आएका थिए । यसले पनि उनको कर्मचारीको माथिल्ल्लो तहमा राम्रै चिनजान भएको जनाउँछ । सरकारी कर्मचार िमात्रै होइन प्रहरी प्रसाशनमा पनि उनको राम्रै चिनजान रहेको उनी निकटस्तहरु बताउँछन् ।
यसैको फाइदा उठाउँदै उनले अनुचित लाभसमेत लिएको चर्चा हुन्छ । सेनाका उच्च अधिकारी, विभिन्न दलका नेतासँग पनि रामै्र उठबस छ । दीपाले अपहरण, ठगी, जवर्जस्ती असुलीलगायतका आपराधिक मुद्दामा फसेका व्यक्तिहरूसँग मुद्धा मिलाइदिने भन्दै असुल्ने गरेको समेत प्रहरी र्वतमा चर्चा हुन्छ । उनले गैरकानुनी रुपमा गरेका कतिपय काम प्रहरी प्रसाशनकै सहयोगमा उन्मुक्ति पाएको बताइन्छ । उनको पूर्व प्रधानमन्त्रीको डा. बाबुराम भट्टाईसँग पनि उठबस रहेको विवरण आए । उनले कुनैबेला भट्टराईसँग खिचेको तस्बिर भाइरलै भयो ।
उनको नाम वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगीमा समेत जोडिएको छ । दुई वर्षअघि जापान रोजगारीका लागि भाषा परीक्षा हुने विवरण आएसँगै मेनपावर कम्पनीहरुले विभिन्न बहानामा ठगी सुरु गरेका थिए । जापान रोजगार सुरु नहुँदै सयौं युवा दलालीबाट ठगिएका छन् । जसमा दिपा पनि संलग्न भएको विवरण आएका थिए । जापान रोजगारीको चर्चा सुरु भएसँगै केही म्यानपावर व्यवसायीले पत्रिकामै विज्ञापन गरी पैसा असुलेका थिए । जसमा ठगी भएको उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमै परेको थियो । विभागकाअनुसार गठी गर्नेको सूचमा दिपाँ कुँवर केसीकोसमेत नाम थियो ।
दिपाको आरोपमा न्यायाधीशको चासो !
दिपाको उठबस सेना, प्रहरी प्रसाशन र राजनीतिक नेतृत्वसँग मात्रै होइन न्यामूर्तिहरुसँग पनि राम्रै रहेछ भन्ने उनको आरोपमा न्यायालयका एक न्यायाधीशले देखाएको चासोले देखाउँछ । सर्वोच्च अदालतका एक बहालवाला न्यायाधीशले पूर्वमन्त्री प्रभु साहविरुद्धको ‘षडयन्त्र’मा चासो देखाएको बताइन्छ । उनको चासोलाई अस्वाभाविक ठान्नेहरु अमुक समूह वा नेताको राजनीतिक षड्यन्त्रको हिस्सा बन्दै प्रहरीलाई दबाब दिने कार्य गरेको दाबी गर्छन् ।